Vachitaura neStudio 7 mushure mekushanyira madhamu kwaitwa nekanzuru pamwe nevatapi venhau neChishanu, meya weguta reBulawayo, VaMartin Moyo, vati vari kufara kuti madhamu mashanu pamatanhatu anopa mvura kuguta reBulawayo, akazara izvo zvisati zvamboitika mukati memakore anopfuura gumi nematanhatu apfuura.
VaMoyo vati shuviro yekanzuru yavo ndeyekuti hurumende itore mukana wemvura yakawanda iripo pari zvino kuti iite hurongwa huchaita kuti dambudziko rekushaya mvura rinombotarisana neguta reBulawayo ripere.
Nekuda kwekuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda, madhamu anopa mvura kuguta iri anombosvika pakuwoma zvekuti kanzuru inosvika pakumbovharira vagari mvura senzira yekuedza kuti mvura iyi ikwane.
Sachigaro wekomiti yeFuture Water Supplies and Water, Action VaNorman Hlabani, vati vanotarisira kuti hurumende ipe mari kuchirongwa chekuvaka dhamu reGwayi-Shangani iro rinonzi rikavakwa rinokwanisa kupedza dambudziko rekushaikwa kunomboita mvura muBulawayo.
Zvichakadaro, musangano wekanzuru wakaitwa munguva pfupi yapfuura unoratidza kuti kanzuru yeguta reBulawayo yave kusangana nedambudziko rekuwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari.
Munyori wekanzuru, VaChristopher Dube, vati kanzuru iri kusangana nedambudziko iri vachiti izvi zviri kukonzerwa nekuti makambani anovatengesera mishonga iyi ari kubatwawo nedambudziko rekushaikwa kwemari yekunze riri munyika.
VaDube vati vanotarisira kuti hurumende, kuburikidza nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe, ichakurumidza kugadzirisa nyaya iyi.
Pamwedzi wega wega kanzuru inoshandisa mari inosvika zviuru makumi masere nezvisere zvemadhora mukutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari.
Dambudziko rekushaikwa kwemishonga yakakwana yekuchenesa mvura rakambotekeshera munyika mumakore a2007 na2008 apo mari yemunyika yakange isisina simba zvichienzaniswa nemari yekuAmerica.